‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ गीत हटाएपछि के भन्छन् पशुपति शर्मा ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ गीत हटाएपछि के भन्छन् पशुपति शर्मा ?
काठमाडौँ, ५ फागुन, लोकगायक पशुपति शर्माले फागुन ३ गते युट्युवबमा हालेको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ गीत एकाएक भाइरल भएसँगै युट्युबबाट हटाइएको छ । देशको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई सीधै प्रहार गरेको यो गीतप्रति केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले विरोध गरेपछि शर्मा आफैले गीत हटाएका हुन् ।
‘गीतमा समावेश केही शब्दहरुमा मेरा केही शुभचिन्तकहरुको असंतुष्टी रहन गएको देखियो’ उनले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै भनेका छन् । उनका शुभचिन्तक भनेका युवा संघ नेपालका कार्यकर्ता भएको पुष्टि भइसकेको छ । भिडियोमा युवा संघको झण्डा पटक पटक देखाएर अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै केही युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि फेसबुकमार्फत विरोध जनाएका छन् ।
शनिबार साँझ नै गीत हटाएपछि आइतबार शर्माले पुन: फेसबुकमा अर्को स्टाटस लेख्दै यो गीत कुनै पार्टीको समर्थन र कुनै पार्टीको बिरोधको रुपमा सिर्जना नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । साथै उनले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालप्रति कसैले आफ्नो नाम जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘म प्रथम उपाध्यक्ष रहेको संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल प्रति लक्षित गरी केही प्रचार प्रसार नगरीदिनु हुन पनि बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।’ उनले यो गीत विशुद्ध भ्रष्टाचार र धेरै वर्षदेखि विद्यमान विसंगती र विकृति विरुद्ध मात्रै लक्षित रहेको बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् उनको स्टाटस जस्ताको तस्तैः
Tagged पशुपति शर्मा लुट्न सके लुट
पूर्वकानून मन्त्री तामाङ भन्छन्, ‘पाठकलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ’
वडादशैँ, तिहार तथा छठ पर्वको ‘सुरक्षा योजना – २०७५’ सार्वजनिक
Tags: पशुपति शर्मा, लुट्न सके लुट